MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA EEYAHA BOSHIH - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Eeyaha BoShih
Boston Terrier / Shih-Tzu Dogs Nooc isku dhafan
'Kani waa sawirka haweenkeena Boston Terrier / Shih Tzu isku dhafka ah. Magaceeda waa Bailey waana labo sano jir sawirkan. Waxay miisaankeedu yahay 23 lbs. waana mid saaxiibtinimo badan. Waxay jeceshahay dadka, gaar ahaan carruurta, iyo eeyaha kale. Waxay ahayd mid aad u fudud gurijoog ah waana caqli badan. Iyadu waa mid aad u ciyaareysa oo jecel dabaasha. Waxay aad ugu orod badantahay eey yar waxayna ku xoogan tahay cabirkeeda. Waxay ahayd mid aad u fudud in la xero tareenka maxaa yeelay socod ku aadid waa mid ka mid ah waxyaabaha ay ugu jeceshahay in la sameeyo. Weligeed ma buko baabuur oo way garaacdaa markay wax uun kor u kacaan. Caadada xun ee kaliya ee aan ka fikiri karaa waxay tahay inay jeceshahay qodida oo ay leedahay ciddiyo culus. Dhakhtarkayaga xoolaha ayaa jecel tarankaan waxayna sheegtaa inay aad u caafimaad qabto. Aad ayaan ugu qanacsanahay noocyadan isku dhafan waxaanan ka helnaa faallooyin badan iyada. Waxay leedahay sagaal walaalo ah oo ka kala yimid laba qashin oo kala duwan qof walbana wuu jecel yahay inta badan maxaa yeelay waxay ku fiican yihiin carruurta oo aad bay u ciyaaraan.
BoShih ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Boston Terrier iyo Shih-Tzu . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta oo aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Lucy the BoShih (Boston / Shih Tzu hybrid) oo jirta 10 bilood iyo 7 rodol
Cuddles iyo Frenchie, laba Boshihs (Boston Terrier / Shih-Tzu mix) - 'Cuddles waxay leedahay dhagaheeda hoos Frenchie waa tan dhagaha kor u leh. Hooyadood waxay ahayd Boston Terrier papered aabahoodna waa papered Shih-Tzu. Miisaanka buuxa ee ay koraan waa qiyaastii 20 rodol. Iyagu waa eeyaha ugu jacaylka badan weligood!
4-jir Bo-Shih eey ah - aabaha waa 13-lb. lacag iyo caddaan AKC Shih Tzu oo hooyadu waa 11-lb. AKC Boston Terrier.
4-jir Bo-Shih eey ah
Ku mashquul BoShih sida ey yar oo 8-toddobaad jir ah— Waan helnay, laakiin isagu waa qof jacayl badan, ciyaar badan, aadna u caqli badan. Horaa loo bilaabay tababarka dheriga . Waa inay fududahay in isaga la tababaro.
'Dembigu waa seddex meelood meel Boston Terrier / rubuc ah Shih Tzu. Iyadu waa qof aad u firfircoon, kalgacal leh, jeceshahay la xiriir dadka eyga. Markii la gooyey waxay u egtahay gabi ahaanba Boston, qaybta Shih Tzu ee ka muuqata jaakad, taas oo dabiici ahaan dherer dhexdhexaad ah, iyo malaha indhaha. Waxay jeceshahay inay ku fuusho gaariga oo laga bilaabo cunug yar waxay leedahay edeb baabuur oo fiican tababar yar. Waxay la nooshahay bisado, kittens iyo ey weyn. '
iskudhafka bulmastiff rottweiler ee iibka ah
sida loo ogaado in eeygaagu yahay coydog
adhijirka Australiya iyo isku dhafka collie xuduuda
4 bilood jir ah eey yar